Reformista Mpikambana Ao Amin’ny Parlemanta Iraniana, Manosika Ny Hamotsorana Ireo Mpitarika Ny Hetsika Maitso Gadraina Ao An-tranony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2017 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, 繁體中文, English
Te-hanafaka ireo mpitarika ny Hetsika Maitso gadraina ao an-tranony ireo mpikambana Reformista ao amin'ny parlemanta Iraniana. Sary avy amin'i ICHRI ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan‘ny Foiben'ny Zon'olombelona ao Iràna ity lahatsoratra ity.
Nametraka ny “Kaomity Mikatsaka ny Fampitsaharana ny Fanagadràna ao an-trano” ireo Reformista mpikambana ao amin'ny Parlemanta Iraniana, taorian'ny fampidirana tany amin'ny hopitaly an'i Mehdi Karroubi, 79 taona, mpitarika ny mpanohitra.
“Te-hamaha ity olana ity tsy misy famendrofendroana atao amin'ny haino aman-jery na fitabatabana ara-politika izahay”, hoy Ghasem Mirzaei Nikoo nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fikambanana naorin'ny fanjakana Iraniana Labor News Agency tamin'ny 8 Aogositra 2017. Mpikambana ao amin'ny Vondrona Hope Faction (Rantsana Fanantenana) ao amin'ny Parlemanta i Nikoo, izay manohana ny Filoha Iraniana Hassan Rouhani.
Nanampy ilay reformista mpikambana ao amin'ny parlemanta hoe efa nanao fivoriana mialoha niaraka tamin'ny mpitondra tenin'ny Parlemanta, Ali Larijani, ny komity mba handinihana ireo fomba handrosoana.
Hatramin'ny 2011 i Karroubi, miaraka amin'ireo hafa mpitarika ny mpanohitra, Mir Hossein Mousavi (75) sy ny vadiny Zahra Rahnavard (71), no natoka-monina ao an-tokantranon-dry zareo noho ny fiarovam-panjakana, noho izy ireo nambara ho nandrisika ireo hetsi-panoherana am-pilaminana nataon'ny Hetsika Maitso hanoherana ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena niteraka fifandirana lalina tamin'ny 2009. Ny taona 2009, samy nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izy sy i Mousavi.
Nentina tany amin'ny hopitaly iray any Teheràna i Karroubi ny 24 Jolay teo noho ny fidinan'ny tosidràny. Roa andro taorian'ny nidirany tao, nandalo fepetra TIPS izay nitsaboana ny fahatsentsenan'ny làlan-drà iray izy, araka ny filazan'ny zanany lahy, Hossein Karroubi.
Navoaka izy tamin'ny 28 Jolay, saingy tao anatin'ny ora vitsivitsy dia niha-ratsy ny toe-pahasalamany ary nentina niverina tany amin'ny hopitaly indray nanaovana fizahàna ny làlan-dràny tamin'ny 31 Jolay.
Mir Hussein Mousavi (avy aty ankavanana) lasa “mpitarika” ny Hetsika Maitso taorian'ny nanovàny ny lokon'ny fampielezankeviny hitovy amin'ny an'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra izay heverin'ny olona an-tapitrisany ho fifidianana hosoka. Mousavi, vadiny Zahra Rahnvard (eo afovoany) sy kandidà reformista iray hafa, Mehdi Karroubi (avy aty ankavia), dia nosamborina noho ny “fitarihana fikomiana”
Ny filoha Hassan Rouhani, izay nampanantena fa hiasa ho famotsorana ireo gadra politika nandritra ny fampielezankeviny tamin'ny 2013, dia nangina tamin'ny fidiran'i Karroubi hôpitaly. Ny 1 Aogositra, nanambara fanantenana ho amin'ny fahasitranany ny mpitondra tenin'ny governemantany, Mohammad Bagher Nobakht.
“Raha isika maniry ny hahasalàma ireo olona malalantsika ireo, dia manantena isika fa tsy hisy zavatra hitranga hampitebiteby ny fianakaviany na ny vahoaka”, hoy i Nobakht. “Tokony hiezaka isika hiaro ny tombontsoam-pirenena sy hitondra fandriam-pahalemana eo amin'ny fiaraha-monina.”
Misokatra ny varavarana [ho an'ny famahàna olana], hoy izy nanampy. Tsy nanambara vahaolana tsy azo tanterahina ny mpitarika farantampony.
Araka ny fanehoankevitr'ireo manampahefana mahazatra amin'ilay tranga, hatry ny ela no nanantitrantitra fatratra ilay Mpitarika Farantampony, Ali Khamenei, fa izy telo ireo dia tokony haneho fialantsiny amin'ny nandraisany anjara tamin'ireo hetsi-panoherana am-pilaminana tamin'ny taona 2009, izay noravan'ny fanjakana tamin-kerisetra.
Gholamreza Heidari, mpikambana ao amin'ny “Komity Hikatsahana Ny Fampitsaharana Ny Fanagadràna ao an-trano”, dia nilaza tamin'ny masoivoho Iraniana misahana ny asa fanaovana gazety ny hadisoam-panantenany noho ny tsy fisian'ny hetsika nataon'i Rouhani.
“Toa tsy mampino hoe nangataka ny fampitsaharana [ny fanagadràna an-trano] ny vahoaka ary ny filoha mihitsy no manao fanambarana vitsivitsy manaiky izany, nefa tsy nahalala ny fanaovany hetsika momba izany isika”, hoy izy:
Tsy milaza izahay hoe ny filoha ihany no tokony hanao zavatra momba izany, fa tambonin'ny zavatra rehetra, izy no filohan'ny Filànkevitra Farantampon'ny Fiarovam-pirenena, ary nanao fampanantenana izy tamin'ny fampielezankeviny tamin'ny 2013 sy 2017, ary araka ny lalàm-panorenana dia manana adidy hiaro ny zo fototry ny vahoaka izy.
Nandritra ny fampielezankevitra izay nitondra ho any amin'ny fahalaniany indray tamin'ny May 2017, nanolo-kevitra ankolaka i Rouhani fa tiany raha voavaha ilay olana satria ny vahoaka miantsoantso fampitsaharana ny fanagadràna ao an-trano. “Handeha any amin'ny biraom-pifidianana izahay hampitsahatra ny fanibohana”, hoy izy tamin'ny famoriam-bahoaka tao Zanjan tamin'ny 15 May.
Nivantana kokoa i Rouhani nandritra ny fampielezankeviny ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013.
“Afaka manolotra fepetra toy izany isika amin'ny taona ho avy, ireo izay naiditra am-ponja na nogadraina tao an-tranony noho ireo hetsika tamin'ny taona 2009 dia navotsotra,” hoy izy tamin'ny fihaonambe tao amin'ny Oniversite Sharif tao Teheràna tamin'ny 13 Mey 2013.
Maro ireo mpanao lalàna sy mpanao politika ary mpikatroka mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona no niezaka nitsidika an'i Karroubi tao amin'ny Foibe fitsaboana sy fikarohana momba ny làlan-drà sy ny fo ao Rajaei,Teheràna, nandritra ny nitsaboany tena tamin'ny faran'ny Jolay. Betsaka no noroahana hiverina.
Navoaka tao amin'ny hopitaly i Karroubi ary naverina nogadraina tao an-tranony tamin'ny 10 Aogositra 2017.